ဆောင်းယွန်းလ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 11
ဆောင်းယွန်းလ ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃ ငိုစရာရှိတာတွေကို အကြွေးထားလိုက်ပြီး ရယ်စရာတွေ မောသွားတဲ့အခါ ပြောစရာရှိတာတွေကို ဆက်ဆိုကြတာပေါ့… ကံတရားကို လူကြုံပါးလို့ရရင် အမှန်တရားရှိရာဘက် နေထွက်ပေးဖို့အကြောင်း တောင်းစရာရှိတာတွေကို ဆက်ဆိုကြတာပေါ့…. ခေတ်ဟောင်းတေးတွေကို အခေါက်ခေါက်အခါခါ ပြန်ဆိုကြသလိုမျိုး...
မှတ်တိုင်ပါတယ် ဆောင်းယွန်းလ ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၃ မှတ်တိုင်ပါတယ်လို့ သွက်သွက်လက်လက် အော်ဟစ်ရင်း ဆင်းလိုက်မိတဲ့ မှတ်တိုင်က ပျော်ရွှင်ခြင်းမှတ်တိုင် မှတ်တိုင်ပါတယ်လို့ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဟစ်အော်ရင်း ဆင်းလိုက်မိတဲ့...
မပြီးတာတွေလည်း မပြီးသေးဘူး ဆောင်းယွန်းလ ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃ ပြီးတာတွေလည်း ပြီးပါစေတော့လို့ သားပြော မယားပြောမပြောပါနဲ့ ပြီးပါပြီဆိုတာတောင်မှ မပြီးတာတွေ မပြီးခဲ့သေးဘူး မပြီးတာတွေက ပိုပြီးတော့တောင် မပြီးနိုင်သေးဘူး…. နေ့တဓူဝဖြီးလိမ်းသုတ်သင်ထားရတဲ့ သက်ရှိခန္ဒာပေါ်မှာ ဘာကို...
ဆောင်းယွန်းလ – ငါတုို့ခေတ်ရဲ့ မိသားစုမှာ
ငါတို့ခေတ်ရဲ့ မိသားစုမှာ ဆောင်းယွန်းလ ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃ ငါတို့ခေတ်ရဲ့ မိသားစုမှာ တယောက်က အရှေ့အရပ်ကို နေထွက်ပြီး ကျန်တယောက်က အနောက်ဘက်ကို နေ၀င်တယ်…. ငါတို့ခေတ်ရဲ့ မိသားစုမှာ ထမင်းလက်ဆုံစားရတဲ့ စနေ တနင်္ဂနွေရယ်လို့ကိုမရှိကြဘူး…....
ဆောင်းယွန်းလ – မီးခုိုးရောင် သီချင်း
မီးခိုးရောင် သီချင်း ဆောင်းယွန်းလ နုိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၃ ဆုတောင်းခြင်းနားနီးလို့ လူဖြစ်ခဲ့ရ ကာရံနားနီးလို့ ကဗျာတွေဖြစ်ခဲ့ရ မြစ်ချောင်းနားနီးလို့ တံငါဖြစ်ခဲ့ရ တောတောင်နားနီးလို့ မုဆိုးဖြစ်ခဲ့ရ… ဖိနှိပ်သူနားနီးတော့ သူပုန်ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့…. လမင်းနဲ့နီးနေပါရဲ့နဲ့ အလင်းတပြက်မျှ မလက်ခဲ့သေးဘူး...
ပြောင်းလဲခြင်းတွင် ပြောင်းလဲတတ်သော ဆောင်းယွန်းလ နုိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၃ မကျေနပ်ရင် မသေမရှင်ဖြစ်ဖြစ် အသေဖြစ်ဖြစ် လက်ညှိုးတကွေးမှာ မောင်းခလုတ်တချက်ဖြုတ်လိုက်ရုံလေးပဲ… ကျည်ဆံထိပ်ဖူးဖျားမှာ စိတ်ကူးတံတားထိုးပြီး မိုးမီးလောင်အောင် လေပင့်လိုက်ရုံလေးပဲ… ဘာဖြစ်ဖြစ်…ဖြစ်ချင်ရင် ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်လိုက်ကြပြီး ပျက်ချိန်တန်တော့လည်း...
ဆောင်းယွန်းလ – အေးအေးလူလူအချိန်ရရင် ရာဇ၀င်စာအုပ်တွေ ပြန်ဖတ်ချင်တယ် ..
အေးအေးလူလူအချိန်ရရင် ရာဇ၀င်စာအုပ်တွေ ပြန်ဖတ်ချင်တယ် ဆောင်းယွန်းလ နုိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၃ ရခဲလှပါတယ်ဆိုတဲ့ လူ့ဘ၀ထဲမှာ ရလေရာရာကို ရောက်လေရာရာ အရပ်ကနေ ခဲရာခဲဆစ်ခဲထားလို့ အခိုက်အတန့်ဆိုတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေထဲမှာ တန်ဖိုးနဲ့သိက္ခာတွေကို မပြတ်တမ်း ဇာတ်လမ်းထွင် ခဏခဏ...
ဆောင်းယွန်းလ – ကြေကွဲစိတ်ကုို လေထဲ ချိန်မိခြင်း
ကြေကွဲစိတ်ကို လေထဲချိတ်မိခြင်း ဆောင်းယွန်းလ နုိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃ စာရွက်ဝါ၀ါတွေပေါ် ဖိတ်စင်လွင့်ကျသွားတဲ့ စိတ်တွေကို တရွက်ချင်း ပြန်ကောက်စီရင်း တကိုယ်စာ အခန်းကျဉ်းထဲမှာ ကဗျာနဲ့သီနေလိုက်မိတယ်… မေမေ..အပျင်းဖျားတဲ့အခါမှာတော့ ညီလေးနဲ့ ညီမလေးတို့ အနားမှာရှိနေပေးပေါ့ မေမေ..ဘုရားသွား...
ဆောင်းယွန်းလ – တဒင်္ဂလေးများ (၂)
တဒင်္ဂလေးများ (၂) ဆောင်းယွန်းလ နုိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၃ အခြေအနေ ရွှေငွေတို့နှင့် ဘ၀အရေး ခဏတဖြုတ်လေးများမှသည် လူတလုံးသူတလုံးဖြစ်ရေးနှင့် ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် ဘိုးဘေးဘီဘင်ထိ တဒင်္ဂစိတ်ကူးများအတွင်း တဒင်္ဂနှင်းမိုးများရွာချပြီးနောက် တဒင်္ဂနေတပွင့်က တဒင်္ဂပန်းခြံတခုအတွင်းသို့ အလေအလွင့်များကိုသယ်ဆောင်လျှက် လမ်းလျှောက်ဝင်လာခဲ့သည်…...
ဆောင်းယွန်းလ – အမ်မရာကုို လွမ်းလုို့ဖွဲ့တဲ့ကဗျာ
အမ်မရာကို လွမ်းလို့ဖွဲ့တဲ့ကဗျာ ဆောင်းယွန်းလ အောက်တုိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၃ တယောက်တည်း “နေ” ကိုထိုင်ကြည့်ရင်း “လ”ထွက်လာမလားလို့ စောင့်မျှော်နေထိုင်လာခဲ့ရတဲ့ အောက်တိုဘာဟာ နိုဝင်ဘာကိုမကူးမချင်းထိတော့ အောက်တိုဘာပါပဲ… အောက်တိုဘာဖြစ်စေ နိုဝင်ဘာဖြစ်ဖြစ် ငါ့အထီးတည်း ကမ္ဘာမှာ နေတပွင့်မှ...
ဆောင်းယွန်းလ – ခိုက်ပြီးတန့်နေတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ (ကဗျာ)
ခိုက်ပြီးတန့်နေတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ ဆောင်းယွန်းလ အောက်တုိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၃ အနေအထိုင်မတတ်တော့ တနေ့တာရဲ့ ၂၄ နာရီက အနည်ထိုင်တယ်ကိုမရှိဘူး တောင်သွားသွား မြောက်ရောက်ရောက် ပြဿဒါးထဲက ပြဿနာက ဆီလိုအပေါက်ရှာထွက်လာတတ်တယ် ခေတ်ကို ၀တ်ဆင်ပေးဖို့ အနွေးထည်တထည်လောက်...
Saung Yun La – Poem
ငါးနာရီလာရ၏ ဆောင်းယွန်းလ အောက်တုိုဘာ ၄၊ ၂၀၁၃ ကမ်းမကပ်နိုင်ခဲ့သေးတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေက ရေမိုင်ပေါင်း သိန်းခြောက်သောင်းငါးထောင် နိုင်ငံတော်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ တောင်ဘက်အရပ်က တောင်စောင်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတော်အိပ်ပျော်နေတဲ့ မြောက်ဘက်အရပ်က နွံအိုင်တွေကြားမှာ ဆန္ဒဟာ ပြာအိုင်ထဲ အခဲမကြေမှုတွေနဲ့သားဖောက်ပြီး လွန့်လွန်လူးလျှက်...
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆောင်းယွန်းလ စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၃ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မနက်ခင်းတွေကို အဟောင်း အဆိုးတွေနဲ့ မျက်နှာသစ်နေခဲ့ရတယ်… အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘာလုပ်လုပ် ဘာတွေးတွေး အနုတ်ဘက်ကို အားပေးနေခဲ့တယ်… အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကဗျာတွေကန်းပြီး သီချင်းတွေသေနေတဲ့ လမ်းမှာ...